Apple dia mamorona fampiharana fanohanana ara-teknika | Avy amin'ny mac aho
Apple dia mamorona rindranasa fanohanana
Ny iray amin'ireo mety ananany dia an'ny Apple serivisy mpanjifa y fanohanana ara-teknika, ary araka ny tatitra vaovao avy any Apple, dia mitady fomba hanamboarana azy io izy mora kokoa sy haingana kokoa omeo ity fanampiana ara-teknika ity. Araka ny tatitra navoaka tamin'ny 20 Novambra, Apple dia nitatitra fa mamorona rindranasa ho an'ny iOS izay hanome ny mpanjifany fidirana mora kokoa noho ny amin'ny ampio ireo mpiasa mpanohana ara-teknika anao hiasa haingana. Ny famahana olana dia hatao miaraka amin'ny tolo-kevitra isan-karazany momba ny fitaovanao sy ny safidinao amin'ny fanamboarana azy. Ireo safidy ireo dia handrakotra Macs, iPhones, iPads, ary fitaovana marika marika Apple hafa.
Ny sary avy amin'ny fampiharana tsy ofisialy dia natolotra an'i Sonny Dickson ary navoakan'i voalohany uSwitch Tech, ary mampiseho antsipiriany maromaro momba ilay rindranasa, ary koa ny serivisy izay hifandray amin'ny rindranasa.
Manokana, ireo mpampiasa fampiharana dia mahazo miditra amin'ny Fanohanana ara-teknika an'ny Apple, ao anatin'izany ny safidy ho an'ny a resaka mivantana amin'ny alàlan'ny chat. Ireo mpampiasa koa dia afaka mahazo ny fampahalalana ilaina amin'ny alefaso amin'ny serivisy ny fitaovanaona mandamina fitsidihana ny Apple Store. Misy ihany koa ny safidy hamaky karazana antontan-taratasy manohana ho an'ny fitaovana Apple.
Araka ny loharanom-baovao iray, ny tatitra voalohany dia manondro fa, araka ny efa nampoizina, ny rindranasa vaovao dia hampifandraisina mivantana amin'ny mpanjifa avy aminy ID ID Apple. Midika izany fa ny fitaovana rehetra nosoratanao dia afaka manana ny fanampian'ity fampiharana ity, ka manamora kokoa ny fanampiana na fanampiana ara-teknika ho an'ny vokatra voasoratra anarana rehetra. Mbola misy fanontaniana tsy voavaly, satria tsy fantatra na a na tsia fampiharana apetraka, na dia azo ampidirina amin'ny iOS ho avy toy ny fampiharana Apple hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia mamorona rindranasa fanohanana
Apple Bug vaovao: "Ny iPad Pro dia tsy handoa vola na hamono"